Nnukwu iOS ntọhapụ abịa - iOS 8. m mara mma n'aka na ọtụtụ puku ndị ugbua kwalite ma ọ bụ na-upgrading ha iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka iOS 8. Nke ahụ bụ ihe ọma n'ihi na ha nwere ike na-enweta niile ọhụrụ atụmatụ iOS 8 na-eweta: azịza ekwentị oku, na-eziga SMS ozi, ma na-ele foto na ihe ọ bụla nke ngwaọrụ. Upgrading ka iOS bụ mara mma dị mfe. Ị dị nnọọ mkpa pịa Update on iTunes ma ọ bụ Wụnye Ugbu a na ihe iOS ngwaọrụ nwere ya mere. Otú ọ dị, ị ga-amarakwa na ị chọrọ ime 6 ihe tupu upgrading ka iOS 8. Ma i nwere ike ida nke upgrading.
1. Tulee ngwaọrụ ndakọrịta.
Ọ bụghị ọ bụla iOS ngwaọrụ bụ ike nke na-agba ọsọ iOS 8. Ị mkpa iji jide n'aka na ma gị iOS ngwaọrụ bụ Ofụri Esịt dakọtara na iOS 8 ma ọ bụ. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ngwaọrụ ga-enwe ike na-agba ọsọ iOS 8.
iOS 8 akwado Devices
iPhone iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s na iPhone 6 (Plus)
iPad iPad Obere, iPad Obere na Retina ngosi, iPad 2, The New iPad, iPad na Retina ngosi, iPad Air
iPod aka 5th ọgbọ nke iPod aka
2. Update arụnyere ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-aga na-ụfọdụ n'ime eji ngwa ọdịnala na gị iOS ngwaọrụ na ha nwere update version na-akwado iOS 8, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-emelite ha mbụ. Iji lelee ma e nwere mmelite maka na ngwa ọdịnala na ị chọrọ, ẹkedori App Store ngwa gị iOS ngwaọrụ. Enweta 'mmelite' na ala. Ọhụrụ window, mgbata 'Melite' n'akụkụ ọ bụla ngwa imelite ngwa ka ndị ọhụrụ na version.
3. Doro Anya iOS ngwaọrụ iji naputa ihe nchekwa, na-eme n'aka e ezuru nchekwa maka iOS update
Mgbe emelite ka iOS 8, ọtụtụ iOS ọrụ nwere okosobode iOS 8 update nchekwa nke: nchekwa a chọrọ dịkarịa ala 4.6GB. Ọbụna ụfọdụ chọrọ ka nwere fọrọ nke nta ruo 6GB ime na update. Ọ n'ezie dara mbà n'obi otú ọtụtụ ndị mmadụ. N'ezie, onwe elu ohere maka upgrading ka iOS 8, e nwere ọtụtụ ihe ị na-enwe ike ime:
a). Hichapụ ejibeghi ngwa.
b). Wepụ junk faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ.
c). Hichapụ ozi ederede na iMessages.
d). Ndabere foto na video na kọmputa, na ahụ wepụ ha iOS ngwaọrụ.
e). Na-adịgide adịgide ihichapu ehichapụ faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na otú e si eme ndị n'elu kwuru banyere ihe, biko ịlele nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu >>
4. ndabere data on iOS ngwaọrụ zere data ọnwụ.
E nwere 2 isi ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iOS data: site na iTunes na iCloud.
a). site na iTunes: jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na ẹkedori iTunes. Pịa ngwaọrụ gị aha na iTunes ma pịa 'Back Up Ugbu a'.
b). site iCloud: na gị iOS ngwaọrụ, pịa Ntọala> iCloud> gị banye Apple ID. Ọ bụrụ na ị bịanyere aka na ma ọ bụ na edebewo banyere, na enweta Nchekwa & ndabere. Ọhụrụ window, enweta 'Back Up Ugbu a'.
5. Wụnye ọhụrụ iTunes.
Ọ bụrụ na ị na-aga nweta nkwalite ka iOS 8 site iTunes, i kwesịrị ẹkedori iTunes na ego maka mmelite, wụnye ọhụrụ version bụ mkpa. Ẹkedori iTunes chọta nhọrọ 'Lelee maka mmelite' (na Mac, ọ bụ na iTunes menu. On Windows PC, ọ bụ na Help menu). Mgbe a ọhụrụ version dị, a ozugbo ga-ajụ gị ma ị ibudata ọhụrụ version ma ọ bụ. Pịa 'Download iTunes' iji wụnye ọhụrụ iTunes.
The n'elu kwuru banyere bụ 5 ihe ị ga-eme tupu upgrading ka iOS 8. Ma e nwere ihe ọzọ i nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4S: akwado iOS 7 SHSH Blobs. Ọ na-buru amụma na iPhone 4S wee ghọọ laggy mgbe upgrading ka iOS 8. Ọ ka mma ndabere iOS 7 SHSH Blobs onye maara mgbe downgrade ga-abụ dị.
Ndị ọzọ Isiokwu na-dozie iOS 8 Update Nsogbu i nwere ike
iPhone White ihuenyo Ọnwụ? Ofu
> Resource> iOS> 5 Ihe ị ga-eme Tupu upgrading ka iOS 8